Rummy Wealth Apk Dhawunirodha Ye Android [Pamhepo Kasino] - Luso Gamer
Kubhejera maapplication anoonekwa seanonyanya kufarirwa pakati pevashandisi veandroid. Kunyangwe mazhinji emapuratifomu anosvikika pamhepo ndeye premium. Saka tichifunga nezve nyore uye mahara kuwanikwa kumapuratifomu takaunza Rummy Wealth Apk.
Chaizvoizvo, iko kushandisa ipuratifomu yekubhejera yepamhepo. Iko vashandisi veAndroid vanogona kutora chikamu uye kunakidzwa nemitambo yepamhepo kasino yemahara. Nekudaro, iwe wakanaka pakutora chikamu uye wakagadzirira kutora chikamu mumitambo yekubhejera yepamhepo.
Zvadaro tinokurudzira kuti unyore kutanga nepuratifomu. Kana kunyoreswa kwapera, zvino tenga machipisi ekudyara mari uye kutora chikamu mumitambo yepamhepo. Saka wagadzirira kunakidzwa uye kuwana mari yakanaka wobva waisa Rummy Wealth Download.
Chii chinonzi Rummy Wealth Apk
Rummy Wealth Apk yakanakira online kasino android application. Apo nhengo dzakanyoreswa dzinogona kujoina nyore nyore uye kunakidzwa nekutamba kwemahara pasina kuisa mari. Avo vanofarira kubhejera uye kuwana purofiti vanofanira kutanga vanyoresa.
Maitiro ekunyoresa ari nyore kwazvo, chekutanga vashandisi vanokumbirwa kuti vape zvitupa zvekutanga kusanganisira nharembozha. Pasina kuisa nharembozha, hazvibviri kunyoresa uye kuwana main dashboard.
Kusvika ikozvino takawana iyo application inongotenderwa kune veIndia android vashandisi. Zvinoreva kuti chikuva chinongotsigira nhamba dzenhare kutanga ne +91. Uye muchokwadi, iyi +91 kodhi yenyika yakagoverwa kuIndia.
Kunze kwekupa machisi ekubhejera uye kurarama kubatanidzwa. The Tamba & Gamuchira irikusvikawo mune mamwe akasiyana maficha uye pano isu tozokurukura izvo zvishoma nhanho nhanho. Saka iwe unoda akakosha maficha uye wakagadzirira kunakidzwa nemitambo yepro wobva warodha Rummy Wealth Android.
zita Rummy Wealth
zera 26.9 MB
Developer Mitambo yedenga
Package Zita com.sky.games.rw
Tichiri kutamba mitambo uye tichiongorora papuratifomu zvakadzama takaiona yakapfuma mune akasiyana akakosha maficha. Izvi zvinosanganisira Multiple Gambling Matches, 24/7 Tsigiro, Direct Mailing Bhokisi, Setting Dashboard, Refer & Muhoro, Chengetedza Kubvisa, Chiziviso, Global Chinzvimbo nezvimwe.
Mitambo yakakosha inosvikika kutora chikamu ndeye Teen Patti, 7 Kudzika Pasi, Rummy, Andar Bahar, Mota Roulette, Dragon vs Tiger, Bacarrat, Teen Patti 20-20, Andar Bahar Go, Poker, Best of Five, Fruit Line, Fishing Rush, 10 Makadhi nezvimwe.
Mutambo unonyanya kudiwa uye unoridzwa ndeye 3 Kadhi Poker. Kunodiwa vatambi kuti vaverenge nhamba yemakadhi apfuura uye kuyedza kufungidzira nhamba dzeanopikisa nekuverenga maitiro avo kumeso. Izvi zvinoreva kufanotaura mamiriro emutambo kunoda hunyanzvi hwakawanda.
Kunyangwe mitemo yekutamba iri nyore uye iri nyore kunzwisisa. Kunyanya kukosha iyo purofiti margin pano mukati Poker yakakura uye yakafara. Avo vanoda kutora chikamu uye kunakidzwa yemahara gameplay vanofanira kusarudza iyo yevaenzi account.
Kwete, unotenda kuti wakagadzirira kutora chikamu uye uchida kuwana purofiti yakanaka nenguva. Zvino wakamirirei? Ingo dhawunirodha yazvino vhezheni yeRummy Wealth App kubva pano. Uye nakidzwa nekutora chikamu mumitambo yakasiyana yekubhejera.
Kuisa iyo app kunopa mukana wakananga kumitambo yekasino.
Mitambo iyoyo inosanganisira Teen Patti, Poker uye Best of Five.
Teen Patti Go uye Andar Bahar Go vanowanikwawo.
Kunyoresa kunoonekwa sekusungirwa.
Multilingual plugin inowedzerwa kune vatambi rubatsiro.
Nzira yekudhawunirodha Rummy Wealth Apk
Kana zvasvika pakurodha uye kuwana ekutanga maApk mafaera. Vashandisi veAndroid vanokumbirwa kuti vawane webhusaiti yedu uye vafarire kurodha zvisingaperi maApk mafaera emahara. Kana tikataura nezve iyi chaiyo application file.
Zvino usati waipa mukati yekurodha chikamu chevashandisi veandroid. Isu tinoisa iyo Apk pamusoro peakasiyana android smartphones. Kunze kwekunge isu tine chokwadi nezve kushanda kwakatsetseka kweApk isu hatimboipe mukati mekurodha chikamu.
Isu takatoisa faira rekushandisa pamusoro peakasiyana android smartphones. Uye kusvika parizvino hatikwanise kupupurira chero dambudziko mukati memutambo wepuratifomu. Asi isu hatimbobata copyrights echishandiso, saka isa uye kuisa mari uchifunga nezve njodzi.
Pano pane webhusaiti yedu, takagovana akawanda akasiyana emakasino ane hukama maapplication. Izvo zvine hukama uye zvinogona kushandiswa uye kuiswa seyakanakisa imwe nzira kune iyi faira reapp. Kuti unakirwe nemamwe maapplication ane hukama ndapota tevera zvinongedzo. Ndivo Sunubet Apk uye Rummy Nabob Apk.
Kana iwe uchitenda kuti pfungwa dzako dzakapinza zvakakwana pakuverenga nhamba uye rombo rakanaka rinogara riripo kuti rikununure. Wobva waedza iyi itsva Android application inonzi Rummy Wealth Apk. Uye uwane purofiti ipapo kutora chikamu mumitambo yakasiyana yekasino.
Categories kasino, Apps Tags Tamba & Gamuchira, Rummy Wealth Android, Rummy Wealth Apk, Rummy Wealth App, Rummy Wealth Download Post navigation